Indlu yaseFama KozaVazuza. Intuthuzelo kunye neemvakalelo zobuntwana! - I-Airbnb
Indlu yaseFama KozaVazuza. Intuthuzelo kunye neemvakalelo zobuntwana!
Indlu yeendwendwe ikwiVazuza River Ecopark ngqo kwiFama yeeBhokwe yakwaVazuza. Indlu inayo yonke into oyifunayo: igumbi lokuhlala elibanzi-ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala kunye namagumbi amabini okulala okwesibini. Igumbi elinye lokulala linebhedi enkulu. Kweyesibini - ezimbini ezibanzi 1.5 iibhedi. Kwigumbi lokuhlala - ibhedi yesofa. Indlu ifanelekile kwiintsapho ezinabantwana, abathanda ukuthula kunye nokuthandana kwasemaphandleni.
Indawo enkulu yendlu yindawo ebanzi egqunyiweyo apho zihamba khona izilwanyana ehlotyeni.
Eyona nto ibalulekileyo kubo bonke kwindlu yeendwendwe zethu lithuba lokuzijula kubomi obuzolileyo nobobufundisi kude nesixeko. Iindwendwe zinethuba lokujikeleza ifama, zithathe inxaxheba kubomi bayo. Ufuna ukusenga ibhokhwe? Kuthekani ngokutyisa amantshontsho eehagu? Dibana neegusha zesithuba Texels? Konke oku kunokwenziwa kwindawo yethu. Kwaye emva kokuhamba ngefama, unokuphumla kwiindonga ze-Vazuza, ukubhukuda (ngokwexesha lonyaka) okanye ungene kwimidlalo. indlu yethu inokuba sisiseko sohambo olunomdla. Rzhev, Staritsy, Volokolamsk Kremlin, Joseph-Volotsky Monastery. Kwaye .... sikwanecafe emangalisayo iKOZA VAZUZA, isonka samasi esimnandi, kunye nezinye izimuncumuncu zasefama. Into ongayityiyo, hamba nayo!
Le ndlu ikwindawo entle eco-park iVAZUZA RIVER, kufutshane nehlathi, elunxwemeni lwayo kwidama laseVazuza. IFama ineenkomo, iibhokhwe, iihagu kunye nezinye izilwanyana ezininzi. Kukho indawo yokutya yasefama kwisiza. Iindawo ezikhangayo ezikufutshane: isikhumbuzo seRzhev, icawa ekhukhulayo, isixeko samandulo saseStarita, i-Iosofo-Volotsky Monastery. Uya kufumana imbonakalo eninzi, iigigabytes zeefoto kunye nolonwabo lokuthula.
Siyavuya ukunxibelelana neendwendwe. Sizama ukubonisa ifama yethu, sazise izilwanyana zethu, sivuleleke kunxibelelwano ngomnxeba, WhatsApp, ngeposi. baxelele izibakala ezibangela umdla ngobomi babo.